လက်တော့Batter ကြာကြာသုံးနိုင်ဖို့ :: partner
Homepage > လက်တော့Batter ကြာကြာသုံးနိုင်ဖို့
Laptop ကိုယ်ပိုင်ရှိသူများအတွက် ဒီအချက်ကလေးတွေ ကို စုစည်းပြီးတော့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ... ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေ ကိုပါ ... ပြီးတော့ Laptop ကို Plug မတပ်ပဲ သုံးတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ခဏတဖြုတ် လောက်သာ သုံးစွဲရပါတယ် .. အခုလိုလုပ်တဲ့အတွက် အဲဒီ့ခဏတဖြုတ် ကို နည်းနည်း ခဏတဖြုတ် ပေါ့ အသက်ကလေး ဆွဲဆန့်ကြည့်ရတာပေါ့ .. ကိုယ်သုံးလို့ ကောင်းနေတုန်း အချိန် မျိုးမှ Battery ကကုန်သွားရင် မကောင်းဘူးပေါ့ .. အခု နည်းနည်းလေး Battery သက်တမ်းကို မြှင့်နိုင်အောင်အတွက် ပါ အချက်ကလေးတွေ စုထားလိုက်ပါတယ် ... ခက်ခက်ခဲခဲ မလုပ်ရမယ့် နည်းလေးတွေ ကို ပဲ စုပြီးတော့ တင်ပြလိုက်ပါတယ် ...
(၁) Screen Brightness ကို လျော့ထားခြင်း
ဒီအချက်ကလေး က တော့ ပထမဆုံး Basic အချက်ကလေးပါ .. ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ Brightness ကို မလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ သုံးထားမယ်ဆိုရင် Battery ရဲ့ သက်တမ်းကို အလွယ်တကူ နဲ့ကုန်စေနိုင်ပါတယ် .. ဒါကြောင့် လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသာ အသုံးပြုပြီးတော့ မလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ Brightness ကို လျော့ချ ထားတာပိုပြီးတော့ ကြာကြာ ခံနိုင်ပါတယ် ...
(၂) မလိုအပ်တဲ့ program တွေကို ပိတ်ထားပါ
ဒါပိတ်တာကတော့ Run => msconfig ကနေပြီးတော့ Startup မှာ ကွန်ပျူတာ စစဖွင့်ခြင်းကတည်းက တက်လာမယ့် Program တွေရှိပါတယ် .. အဲဒီ့အထဲက မိမိအနေနဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ၊ တခါတရံမှ သာ သုံးစွဲ တဲ့ Program တွေကို ဖြုတ်ထားပါ .. Ctrl+Alt+Del ကိုနှိပ်ပြီးတော့ မလိုတဲ့ application တွေကိုပိတ်နိုင်ပါတယ် ... ဘာလို့ ပိတ်ရသလဲ ဆိုရင် အဲဒီ့ဖွင့်ထားတာတဲ့ Program တွေ ကနေပြီးတော့ Battery ကို သုံးစွဲ နေလို့ပါ ...
(၃) Internet မသုံးဘူး ဆိုရင် Wifi နဲ့ Bluetooth ကိုပိတ်ထားပါ
မိမိ က Internet မရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာ ဆိုရင် Wifi ကို ပိတ်ထားတာပိုကောင်းပါတယ် ... Wifi ကပိုပြီးတော့ မိမိရဲ့ Battery ကို ပိုပြီးတော့ သုံးပါတယ် ... Laptop မှမဟုတ်ပါဘူး . Phone တွေ Tablet တွေ ဆိုရင်လည်း Wifi နဲ့ သုံးရင် ဘယ်နှနာရီ .. မသုံးရင် ဘယ်နှနာရီ ဆိုပြီးတော့ တောင် ရှိပါတယ် .. ဒါကြောင့် မိမိ က အင်တာနက် ကို မသုံးရင် Wifi ကို ပိတ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါ .. Bluetooth ကတော့ အင်တာနက်နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး .. ကိုယ်ကမှ အရေးတကြီး Share တို့ လက်ခံစရာတို့ မရှိရင် Bluetooth ကိုလည်း ပိတ်ထားတာပိုကောင်းပါတယ် ..
(၄) External device တွေကို ဖြုတ်ထားပါ
USB , External Hard disk စသဖြင့် တပ်ထားတယ်ဆိုရင် ဖြုတ်ထားပါ .. သူတို့က လည်း မိမိရဲ့ Battery ကို အသုံးပြု ပါတယ် .. ဒါကြောင့် မသုံးဘူး ဆိုရင် ဖြုတ်ထားပါ ..
(၅) Schedule လုပ်ထားရင် ပိတ်ပါ
ဥပမာ .. Defrag လုပ်တာကို အရင်ကများ ကိုယ်က ဘယ်နေ့မှာတော့ဖြင့် Defrag လုပ်မယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့ .. အဲလိုမျိုးပေးထား ခဲ့ရင် ပြန်ပြီးတော့ ပိတ်ထားပါ .. အင်တာနက်မသုံးဘူး .. တခြား external device တွေ ကိုလည်း မသုံးဘူး ဆိုရင်တော့ Antivirus ရဲ့ update တွေကိုပါပိတ်ပါ .. သူတို့က Internet မရှိလည်း Update လုပ်ဖို့အတွက် Check လုပ်ပါတယ် .. အဲဒါကြောင့် ပိတ်ထားရင် ပိုတောင် ကောင်းပါတယ် .. Battery အတွက်ပြောတာနော် .. တော်ကြာ အင်တာနက် နဲ့ သုံးတဲ့အချိန် ဖွင့်မထားမိ လို့ ဒုတ်ကောက်တွေ ပေးနေဦးမယ် ... သတိထားပေးပါ ...
(၆) CD / DVD Drive တွေသုံးစရာမလိုရင် မသုံးပါနဲ့ဦး
ကိုယ့်အနေနဲ့ Battery ကို Charge လုပ်ထားတာမဟုတ်သေးရင် CD / DVD တွေကို မလိုရင် မသုံးပါနဲ့ .. CD/DVD ကို ဖတ်ဖို့အတွက် လည်ရတာတွေ ဘာတွေ ကို သုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့် သင့် Battery ကို အများကြီး သုံးစွဲသွားနိုင်ပါတယ် ..
(၇) Screensaver ကိုလည်းပိတ်ထားပါ
Screensaver ကိုလည်း ပိတ်ထားပါ ... ကိုယ်က သုံးနေတာပဲ ဘယ်လိုလုပ် Screensaver က တက်လာမှာလဲ . ဒါကြောင့် Charging လုပ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာ သုံးနေတာမဟုတ်ရင် Screensaver ကိုလည်း ပိတ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါ ..
(၈) တခြားအပူတွေကို ရှောင်ပါ
ကိုယ်ရဲ့ Laptop ကို နေရောင် အောက်တွေ မှာ ၊ တခြား ပြင်ပက အပူတွေ ရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာ မဖွင့်ပါနဲ့ ... ပြင်ပက အပူတွေက Battery ရဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို Reduce ဖြစ်နိုင်စေပါတယ် ..
(၉) Defrag လုပ်ထားပါ
ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို Charge လုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ Defrag ပုံမှန်လေးပြုလုပ်ပေးပါ .. ဒါမှ Window အတွက် Program တွေက သူ့လိုအပ်တဲ့နေရာက နေပြီးတော့ လိုသလိုယူသုံး ပေါ့ .. ကျွန်တော် တို့ အပြင်မှာဆိုရင် ပစ္စည်းတွေကို စနစ်တကျမထားတဲ့ အခါကျရင် မလိုအပ်တဲ့ ရှာရခြင်းတွေ ဘာတွေမျိုးပေါ့ .. အချိန်လည်းကုန် အားလည်းကုန် .. အဲလိုမျိုးပါ .. ဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာကို Defrag လုပ်ပေးပြီးတော့ သေချာလေး စီထားတာ အကောင်းဆုံးပါ ..
(၁၀) Window7သုံးနေ တယ်ဆိုရင် ScreenSlideShow ကို ပိတ်ထားပါ
ကိုယ့်ရဲ့စက်မှာ window7သုံးနေတယ်ဆိုရင် Desktop နောက်ခံ Background က Slideshow ပြနေတာတွေ ရှိနေတယ် ဆိုရင် မထားပါနဲ့ .. အဲဒါတွေ ကလည်း Battery ကို အသုံးပြုပါတယ် .. တချို့ဆိုရင် အဲဒီ့ SlideShow လေးပြတာကို သဘောကျလို့ တခြား window တွေမှာတောင် တပ်ထားတာတွေ ရှိပါတယ် .. ဒါကြောင့် ပိတ်ထားရင် ကောင်းပါတယ် ...
(၁၁) Hibernate ပြုလုပ်ထားပါ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိမိ ကွန်ပျူတာကို အသုံးမပြုတဲ့အချိန်မှာ Hibernate ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် Power save ပိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ် ..
(၁၂) မလိုအပ်တဲ့ Sound တွေကို အသုံးမပြုပါနဲ့
Window7ဆိုပါစို့ .. အဲဒီ့မှာ ဆိုရင် folder လေးတွေ ဖွင့်တာက အစ အသံလေးတွေ ထွက်နေတာတွေ ရှိပါတယ် .. အဲဒါလေးတွေ ကိုလည်း ပိတ်ထားပါ ..
(၁၃) Adaptors ကို မိမိ Adaptors နဲ့မိမိ သုံးပါ
အားသွင်းတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ Adaptor မဟုတ်ပဲနဲ့ သုံးဆွဲမယ် ဆိုရင် အနည်းငယ် Battery ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် ..
ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Adaptor က မရှိခဲ့ဘူး ဆိုရင်တော့ တခြားဝယ်မယ်ဆိုရင် quality နိမ့်တဲ့ Adaptor တွေကိုမ၀ယ်ပါနဲ့ .. Quality မြင့်မြင့်နဲ့ မိမိ ကွန်ပျူတာနဲ့ ကိုက်ညီမယ့် adaptor ကိုပဲ ၀ယ်ပါ ..
(၁၄) power options ကို သုံးပါ
Control panel မှာရှိပါတယ် .. Laptop နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် Adaptor plugin နဲ့သုံးတာရယ် Battery နဲ့သုံးတာရယ် ရှိပါတယ် .. အဲဒီမှာ Battery နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် Turnoff harddisk ဆိုတာကလေးကို လျော့ချပါ ..
(၁၅) Aero Glass ကို ပိတ်ထားရင် ပိုပြီးတော့ ကောင်းပါတယ်
Window XP မှာတော့ Aero Glass ဆိုတာမရှိသေးပါဘူး .. နောက် Window vista နဲ့ window7တို့မှာ Aero Glass ဆိုတာပါလာပါ ပြီ .. တကယ်လိုမှ ကိုယ့်အနေနဲ့ အလုပ်အတွက်အမှန်တကယ်တမ်း အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင် ၊ အလှ အတွက် သုံးနေတာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် တော့ Window Classic ကိုပဲ သုံးပါ .. Window XP မှာ ဆိုရင်လည်း window classic ကိုသုံးလို့ရပါတယ် ..
ဒီအပေါ် က အချက်ကလေးတွေ က တော့ Laptop ကို Charging လုပ်မနေတဲ့ အချိန်မှာ ကြာကြာ သုံးနိုင် ဖို့အတွက် မိမိအနေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားလို့ရအောင်ပါ ... နောက် မှာချင်တာ ကတော့ Laptop အသစ်တစ်လုံးများ ၀ယ်ယူခဲ့ပြီဆိုရင် မိမိ အနေနဲ့ အဲဒီ့ Laptop မှာပါတဲ့ Battery အားကို အကုန်လုံး သုံးပစ်လိုက်ပါ .. တစ်စက်ကလေးမှ မကျန်အောင်ပေါ့ .. ပြီးမှ အားပြန်သွင်းပါ .. ၀ယ်ယူလာပြီးပြီးချင်း ကို တခါတည်း အားမသွင်းလိုက်ပါနဲ့ .. ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲလိုမျိုးအားသွင်း တဲ့ Laptop တွေ က စောစောက လို အားကုန်အောင် သုံးပြီးတော့ ပြန်သွင်းတဲ့ laptop တွေ လောက် Battery သက်တမ်းကြာကြာ မခံတတ်လို့ပါ .. Application တွေကို သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း တစ်ခု ပြီးမှ တစ်ခုသုံးပါ .. တခါတည်း စုပြုံဖွင့်ခြင်းမျိုး မလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာ ...